नेपाली कांग्रेस – Sudarshan Khabar
सिडेनमा देउवा पक्षको जित
पुस, काठमाडौं । सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन) को छैटौं अध्यक्षमा ई. उमेश थानी विजयी भएका छन् । रामचन्द्र पौडेल पक्षका ई. ध्रुव थापालाई १५० मत अन्तरले हराउँदै शेरबहादुर देउवा पक्षका थानी अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । १८ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि थानी र थापा प्यानलसहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । थानीको पक्षमा काठमाडौं केन्द्रबाट १ […]
काठमाडौं। बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नको सम्पत्ति भाइरहेको छ । छानबिनका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ, सुनसरी र मोरङमा रहेको उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको हो । गच्छदारसहित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नमाथि विभागले सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न […]
कोरोना संक्रमित पुर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता थापालाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना
काठमाडौं नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री सुनिल बहादुर थापालाई कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’ संक्रमण पुष्टि भएर आईसोलेसनमा बसिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यमा थप जटिलता उत्पन्न भएसँगै अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। पारिवारीक स्रोतका अनुसार पाँच दिनअघि कोरोना पुष्टि भएका थापालाई ज्वरो आउने क्रम नरोकिएपछि थप उपचारका लागि ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको हो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर […]
प्रधानमन्त्रीका कारण संक्रमण बढेको सांसद थापाको भनाइ
काठमाडौं नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य शैलीका कारण नेपालमा कोरोना महामारी थप जटिल अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । कोरोनाका नयाँ संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र सघन उपचारका लागि कहीँ बेड उपलब्ध नभएको भन्दै थापाले यसबारे प्रधानमन्त्रीले समयमै नसोचेको आरोप लगाएका छन् । आज सामाजिक संजाल ट्वीटरमा उनलेे लेखेका छन्, […]